Tallaabooyin cusub oo laga qaaday Coronavirus oo ka dhacay Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirTallaabooyin cusub oo laga qaaday Coronavirus oo ka dhacay Izmir
17 / 03 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, Headline, TURKEY
Tallaabooyin cusub ayaa laga qaaday coronavirus-ka Izmir
Isagoo sheegay in howsha ugu weyn ee duqa magaalada ay tahay inay ilaaliso magaalada, Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer wuxuu sheegay inay iskudayaan inay sido 8 iyo 500 oo dhaxal oo dhaxal gal ah jiilalka soo socda sida ugu wanaagsan.
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay abuurtay “Guddi Saynis” ah oo lagula dagaallamo coronavirus (COVID-19) si loo muujiyo shaqada degmada. Golaha Sayniska, oo yeeshay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee uu wakiilka ka yahay Duqa Magaalada Tunç Soyer, ayaa la dhaqan geliyay dhaqangelin deg deg ah, si looga hortago faafitaanka viruska. Kulammo ka badan laba qof oo ka socda Dowladda hoose ayaa lagu qabanayaa jawi qumman. Xarumaha qaarkood, oo ay kujirto Sasalı Wildlife Park, oo soo jiidatay dareenka carruurta, ayaa u xirnaa booqdeyaasha.
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo talaabooyin wax ku ool ah qaadaysay ilaa maalintii ugu horraysay ee fayraska lagula dagaallamo coronavirus, oo isu beddelay cudur faafa oo adduunka ah, ayaa abuuray “Guddi cilmiyaysan” oo ka kooban saynisyahano iyo dhakhaatiir, oo midkastaaba yahay khabiir ku takhasusay cilmiga beeraha. Duqa Magaalada Magaalada Izmir Tunç Soyer, oo ka qeyb galay shirkii ugu horreeyay ee Guddiga Sayniska oo ay weheliyaan saraakiisheeda sare, ayaa sheegay in, sidii had iyo jeer, ay uga gudbi doonaan maalmahan dhibaataysan iftiinka hanuuninta. Isagoo hoosta ka xariiqaya in go'aannada ay qaateen guddiga Sayniska ay hagitaan u noqon doonaan dadaallada degmada ee saameynaya nolosha maalinlaha ah ee muwaadinnimada, Duqa Magaalada Soyer wuxuu yiri, "Degmadeena waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso dhammaan fursadaha iyo Kheyraadka aadanaha si howshan adag iyo dhibku uga gudbi karto dhibaatada ugu yar ee suurogalka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku shaqeyn doonnaa miyir iyo go'aan qaadasho ilaalinaysa caafimaadka shaqaalaheeda ilaa xadka ugu badan. Hawshan, waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo asxaabteyda ku shaqeysta naftooda hufnaanta iyo naftooda marka loo eego caafimaadkooda, iyo shaqaalaheenna u xilsaaran hawshan dhammaan hey'adaha, waxaana u rajeynayaa guul iyo wanaag. "
Madaxweyne Soyer wuxuu soo jiitay muhiimadda halganka guud ee coronavirus wuxuuna xasuusiyay inay ka shaqeynayaan wadashaqeyn buuxda iyo isuduwid ka dhexeysa dhammaan hay'adaha dowladda, gaar ahaan Wasaaradda Caafimaadka iyo Maamulka Izmir.
Waxaa lagu dhawaaqay in guddiga sayniska ay ku taageeri doonaan degmada polzmir Magaalo Weyn ee halganka coronavirus ayagoo sameyn doona qiimeyn deg deg ah iyadoo loo eegayo xaalada isbeddela iyo baahida loo qabo in la kaco.
Tallaabooyin dheeri ah ayaa la qaaday iyada oo lagula talinayo Guddiga Sayniska
Tallaabooyin dheeri ah oo loo diro dhammaan qeybaha kala duwan ee degmada oo ay la saxiixato Duqa Tunç Soyer ayaa ku taxan sidan soo socota:
Shaqaalaha iyo galayaasha soo booqda ee dhammaan waaxyaha dowladda hoose (oo ay ku jiraan İZSU, ESHOT, Shirkadda Dowladda Hoose iyo Shirkad-hoosaadyo) waxaa lagu bixin doonaa hal albaab. Iridda laga galo, dhaqtarka iyo kalkaalisada ayaa la meeleyn doonaa, kadib marka la xakameeyo qandhada iyo waxyaabaha laga maarmi karo ee la soo gudbiyo.
Ma jiri doono urur kulan, dhammaan kulammada ka badan laba qof waxaa lagu qaban doonaa kooxo ama khadka tooska ah.
Nadiifinta iyo jeermisyada gawaarida gaadiidka dadweynaha ayaa loo sii wadi doonaa si taxaddar leh sidii ay markii hore ahaan jirtay, hawo joogto ah ayaa la bixin doonaa marka lagu daro nadiifinta iyo jeermiska gawaarida, iyo daryeel shaqsiyeed, nadaafad iyo ilaalin ayaa fiiro gaar ah la siin doonaa. Dhamaan adeegsadayaasha gawaarida, gaar ahaan wadayaasha basaska, waxay isticmaali doonaan galoofiska nadaafadda iyo jiritaanka caqabadaha ilaalinta iyo aagagga kale ee loo isticmaalo. Waa lama huraan in qalabka iyo qalabka la xiriira ay bixiyaan cutubyada ay quseyso. Carqaladaha ilaalinimada waa la xiri doonaa markasta. Gacmo gashiga ayaa si joogto ah loo beddeli doonaa, dhammaan noocyada nadaafadda iyo tallaabooyinka ilaalinta ayaa la qaadi doonaa. Tallaabooyinkoo dhami waxay si gaar ah u baarayaan cutubkeenna quseeya jiritaanka baabuurta dadweynaha iyo badbaadada wadayaasha.
Bixinta baahiyaha biyaha ee dadku si buuxda ay u leeyihiin waa mudnaanta koowaad, waxaana la qaadayaa dhammaan tallaabooyinka lagu xaqiijinayo amniga ilaha biyaha. Waa lagama maarmaan in biyaha la helo dhammaan qoysaska iyo adeegyada bullaacadaha waxaa lagu ilaaliyaa daryeelka ugu weyn si loo ilaaliyo caafimaadka dadweynaha, iyo ogolaanshaha shaqaalaha ka shaqeeya arimahan loo istcimaali doono hab aan carqaladeyn doonin howlaha.
Qeybahayaga nadaafadda iyo jeermiska jeermiska, oggolaanshaha waa la joojiyay aaggan, jeermis-diidka aagagga adeegga bulshada ee magaalada oo dhan xagga nadaafadda, jeermis-dilidda iyo jeermis-dilidda ayaa sii socon doonta. Digtooni kasta ayaa loo qaadi doonaa si loo hubiyo daryeelka shakhsiyadeed iyo badbaadada asxaabteena ka shaqeeya meeladan.
Goobaha ay maamusho Degmadeena iyo shirkadaheena xiriirka la leh (Dhismaha Taariikhiga ah ee Dhismaha Sasalı, Xayawaanka Beeraha, Buca Meydan Cafe, Aşık Veysel Recreation Area, iwm.) Waa la xiri doonaa si looga hortago in dadku isu yimaadaan oo ay ilaashadaan masaafada bulshada. Qaban-qaabada fadhiga ayaa laga saari doonaa qolka qalliinka ee Isbitaalka Eşrefpa Hospitala, Yasemin Cafe iyo hoyga xeebta, mana jiri doonaan adeegyo aan ka ahayn iibinta gacanta. Galoofyada nadaafadda ayaa loo adeegsan doonaa dhammaan adeegyada bukaan-socodka waxaana daryeelka ugu badan la siin doonaa xeerarka jeermiska jeermiska. Howlaha cunnada lama bixin doono hoolka cuntada ee ay ka badan yihiin 50 qof, waxaana la qaadi doonaa talaabooyin amni oo lagu qaadayo meelaha ka hooseeya tiradan waxaana adeega lagu bixin doonaa iyadoo la ilaalinayo masaafada bulshada.
Tallaabooyin nadaafadeed oo dheeri ah ayaa loo qaadi doonaa iibinta biyaha leh kareemada, iyo taxaddar gaar ah ayaa laga qaadi doonaa si loo hubiyo in biyaha loogu adeego karbaash iyo / ama galoofyada saraakiisha iyo ku-takri-falka xarumaha, gawaarida iyo shaqaalaha.
Adeegyada duugta ayaa sii socon doona iyada oo aan la carqaladeyn isla markaana shaqaalaha ka shaqeeya adeegyada aaska waxay bixin doonaan feejignaan dheeri ah si ay ugu hoggaansamaan shuruudaha nadaafadda, shuruucda guud ee fayadhowrka ayaa si adag loogu raaci doonaa nidaamka aaska. Aaska waxaa loo fulin doonaa iyadoo loo eegayo xaaladaha dhimashada waxaana lagu go'aamiyaa danahooda. Waxaa kale oo muhiim ah in la bixiyo dhammaan noocyada shuruuddaha shaqaalaha ka shaqeeya adeegyada aasitaanka si ay u qaataan ilaalin shakhsiyeed, amniga iyo nadaafadda.
Cusbitaalka Eşrefpaşa wuxuu sii wadan doonaa shaqadiisa isagoon wax carqalad ah ku jirin wuxuuna gudan doonaa howlihiisa si waafaqsan mabaadii'da iyo mabaadii'da ay go aansatay Wasaaradda Caafimaadka. Cisbitaalkeenu wuxuu diyaar u ahaan doonaa u adeegida muwaadiniintayada dhammaan shaqaalaha, qalabka iyo hawo-mareenka, oo wuxuu ku sii xirnaan doonaa si dhakhso leh xiriirka Wasaaradda Caafimaadka. Cisbitaalkayaga, rukhsadaha waa la joojiyay iyo daryeelka shaqsiyadeed iyo nadaafadda iyo tillaabowga jeermisyada ee shaqaalaha waxaa lala qaadan doonaa si sax ah.
Guriga xanaanada iyo hoyga ku meel gaarka ah ayaa loo xiray si loo soo booqdo mana jiraan wax cuno looga soo uruurin doono banaanka. Ma jiraan wax dib-u-dhac ah oo ku yimaadda howlaha iyo dayactirka waayeelkeenna iyo muwaadiniinta baahan .. Shaqaalaheenna goobtan waxay qaadi doonaan dhammaan noocyada tallaabooyinka daryeelka-shaqsiyadeed ee daryeel-caafimaadeedka.
Qaybinta mashaariicda kaalmada bulshada ee baraha caanaha iyo guryaha ka dib aasitaanka ayaa muhiim ah, waxaana la sameyn doonaa qiimeyn si loo dheellitiro sii socoshada adeegga iyo geedi socodka amniga shaqaalaha iyadoo la sameynayo barnaamij mudnaan leh illaa dhamaadka bisha. Waxaa ka mid ah baraha caanaha iyo shaqaalaha qaybinta pita, naafo, bukaan iwm. Meeleyn ayaa la sameyn doonaa iyada oo la tixgelinayo xaaladda caafimaad, gaar ahaan shaqaalaha xaaladaha haysta.
Nadiifinta, muhiimadda nadaafadda ee jikada maraq, maaddada, silsiladda qabow, kaydinta karinta iwm. Xaaladaha jeermiska jeermiska ayaa si gaar ah loola socon doonaa, iyadoo la raacayo dhammaan qawaaniinta.
Kooxda dabdemiska AKS iyo shaqaalaheeda caafimaad ayaa loo hayn doonaa howsha waxayna la xiriiri doonaan Isbitaalka Eşrefpaşa, Qeybta Caafimaadka Bulshada iyo Agaasinka Caafimaadka ee Gobolka.
Marka laga hadlayo waaxyada booliska ee dawladaha hoose ee magaalooyinka, degmadu waxay samayn doontaa kormeer adag oo ku saabsan iibinta agabyada sida nadaafadda, nadaafadda, caafimaadka, iwm. Qiimaha qaaliga ah iyo suuqgeynta agabyada aan macquul ahayn. Waa lama huraan in dadweynuhu ka heli karaan cunno caafimaad leh iyo alaabada nadiifinta sicirrada la awoodi karo isla markaana shaqada dhabta ah aan loo oggolaan doonin, iyo qawaaniinta sharciga ee lagama maarmaanka ah si adag ayaa loo dhaqan gelin doonaa.
Dhamaan asxaabteena ayaa ku dhaqi doona gacmahooda saabuun iyadoo loo eegayo shuruudaha adeegga, iyo jeermis-dilaha iyo cinjirka ayaa loo isticmaali doonaa kiisaska biyo iyo saabuun aysan suurtagal ahayn.
Deegaannada hadda jira ayaa had iyo jeer hawo ahaan loo deyn doonaa, adeegsiga waxyaabaha guud ee shaqsiyadeed waa laga fogaan doonaa, oo is-gacan-qaad, is-xoqid, is-dhunkasho, iwm ayaa laga tagi doonaa, oo is-xakameyn ayaa loo sameyn doonaa salaanta fog.
Iyada oo fiiro gaar ah la siinayo nafaqada isku dheellitiran iyo hurdada joogtada ah iyadoo la adeegsanayo biyo badan iyo cabitaanno, afka ayaa la xiri doonaa inta lagu jiro hindhisada, waana laga fogaan doonaa intii suurtogal ah meelaha cidhiidhsan iyo kuwa xiran.
Waa muhiimad aasaasi ah oo mudnaanta koowaad u leh dhammaan asxaabteena sidii ay u ilaalin lahaayeen caafimaadkooda iyo tan qoysaskooda, mana aha in la iloobo inaan adeeg u qaban karno bulshada gebi ahaanba isla markaana aan ilaalin karno caafimaadka bulshada iyadoo la raacayo tillaabooyinka iyo mabaadii'da aan ilaalinno nafsadeena, qoyskeenna iyo ehelkayaga halista badan.
Kumaa kujira Golaha Sayniska?
Uzi. Dr. Serdar Pedükçoşkun, Dr. Sertaç Dölek, Prof. Dr Arzu Sayıner, Prof. Dr. Raika Durusoy, Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Cali Cusmaan Karababa, Uz. Dr. Ali Ağzıtemiz, Uz. Dr. Altan Gökgöz, Uz. DR. Hüseyin Tarakçı, Uz. Dr. Yüce Ayhan.
RayHaber 17.03.2020 Warbixinta Shirka